Lahatsoratra | Fondation des Choisis de Jésus
Tsy misehoseho ny Fisiako
2A_26: Anaka, tsy misehoseho ny Fisiako, indraindray aza dia sarotra tsapaina sy renesina. Izany no natao dia mba hanajana ny fahafahana lehibe izay nomen’ny Ray ho an’ny zanany tsirairay avy ety an-tany. Rehefa ekena tsara sy irina ny Fisiako, dia miha voatsapa ! Misaotra mandray Ahy ao aminao sy maniry Ahy hatrany. Tena tiako ianao.
1D_02: Anaka, te hampianatra anao hanana fijery hafa amin’ireo olana sy famahana azy ny Ray, dia ny fijerevana ny zavatra rehetra aimin’ny mason’ny finoana, ny hamelàna ny zavatra rehetra eo ampelantanan’Andriamanitra… ary ianao, izay hitolagaga, hidera ary hiravoravo, ho lasa vavolombelon’ny Asako. Manaraka an’izay dia ho afaka hampianatra izay niainanao ianao.
Fa maninona no mitady Ahy any an-kafa ianao
3B_03: Ry bitikako, fa maninona no mitady Ahy any an-kafa ianao? Takaro hatrany ny fisiako ao anatinao dia ho takatrao avokoa ny zavatra rehetra. Aza mitady ny ho tonga lafatra amin’ny herinao fa anjarako izany. Raiso ny Fitiavana izay arotsako ao anatinao amin’izao ora izao. Tiako amin’ny mahaianao anao ianao. Mirehi-pitiavana aminao Aho. Tiako ianao.
Avia eto akaikiko
2B_02: Ry Bitikako, avia eto akaikiko, ary mitoera ao anatin’ny fifandraisam-pitiavana lalina sy lehibe Amiko, izay Andriamanitrao. Ao anatin’io fifandraisam-pitiavana lalina sy lehibe io no hiorina ilay olona vaovao ao anatinao izay maka toerana bebe kokoa hatrany.
Aza miraika amin’izay
3B_14: Ry bitikako, aza miraika amin’izay fironan-kevitr’izao tontolo izao sy ireo lazaina fa sarobidy eto an-tany. Tokana ihany no tokony ho tanjonao dia ny manatanteraka ny Sitrapon’ny Ray. Mirehim-pitiavana aminao ny Foko. Avelao ny afon’ny Fitiavako handoro anao amin’ny afony. Tiako ianao
Maria, dia nomeko iraka mba hanaraka anao
2B_15: Anaka, ilay ankizivaviko, Maria, dia nomeko iraka mba hanaraka anao, hitantana ny dianao. Eo Izy, eo akaikinao ; ary eo amin’ilany, dia ny Zanako lahy tokana, Jesoa, tena akaiky anao. Raha mihiratra ny masonao ka mahita ireo Olo-masina sy ireo tafika lehiben’Anjely, dia ho fantatrao fa tsy irery ianao, fa tena voadidina tsara. Aza matahotra, mandrosoa mandrakariva ao anatin’ny Finoana madio. Omeko anao ny tso-dranon-dRay miaraka amin’ny Fitiavako.
3B_32: Anaka, fotoanan’ny fivavahana, fitsaona sy fanantonana ireo sakramenta izao. Amin’ny alalan’izy ireo dia hitoetra ao amin’ny fifankazaona tsara amiko ianao, ao anatin’ny fiombonana amin’ireo olo-masina any am-paradisa sy eto an-tany, ary hitoetra ao anatin’ny lamban’ny Reniko Masina ary tsilovin’ny Fanahy Masina sy ho eo ambany fiarovan’ireo Anjely Masina. Koa aza manana ahiahy ianao.
Ny lanjan’ny fijaliana
2A_05: Anaka, raha mba fantatrao ny lanjan’ny fijaliana mba hidiranao lalindalina ao anatin’ny Fitiavana… Ny fijaliana dia miova ho fahasoavana sy tso-drano rehefa raisina sy atolotran’ny Ray miaraka amin’ireo Fijaliako.
Dia raisiko ireo adin-tsainao
1D_01: Anaka, rehefa manao ny tenanao ho kely ianao, dia raisiko ireo adin-tsainao, ireo hafalianao sy ny alahelonao ka atolotro ny Ray, ary Izy, ao anatin’ny Famindram-pony lehibe sy ny Fitiavany, mametraka ny rantsa-tànany, Izy Mpahary mba hanapaka ireo fatotra manakana anao tsy ho olona afaka.
Ry zanaky ny Foko
3B_33: Ry zanaky ny Foko, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, maniry ny handray anao eto an-tsandriko Aho ary hamihana ny fonao eo amin’ny Foko mba hatsapanao ny Fitiavako. Tsy manana afa tsy fitiavana ho anao Aho ; sokafy midanadana kokoa ny fonao. Raha sarotra ho anao ny manokatra azy, omeo alàlana Aho ary dia avy amin’ilay “Eny” tanteraka sy tsy misy fepetra, dia ho tanterahako izany.
Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany
Afeno ny fampiharana vaovao